တန်ဖိုးတဲ့ …. လေးဖြူဆိုထားတဲ့ သီချင်းလေး တစ်ပုဒ်ပါ။
ကုန်လွန်သွားတဲ့ အချိန်တွေကို ပြန်လည်မရတောတဲ့ အကြောင်း။
အချိန်ကို အကျိုးရှိအောင် သုံးသင့်ကြောင်း စပ်ထားတဲ့ သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ပါ။
စင်ကာပူမှာ ရိုက်ထားတဲ့ VCD ကောင်းတစ်ပုဒ်ပါ။
ကဏ္ဍများ- ခံစားချက်, နားထောင်ဖြစ်တဲ့သီချင်းများ
at Friday, March 18, 2011 ရေးသားသူ မျက်မှန်လေး
7 ယောက် စိတ်ဝင်တစားဖတ်ရှူ့အကြံပြုသွားပါတယ်ရှင်။
အိမ်ထောင်ရေး နဲ့ ပညာရေး
ကိုယ် ဒီပို့စ်ကို ရေးချင်နေတာ ကြာပါပြီ။ ဒါပေမယ့် အချိန်မရှိတဲ့ အတွက် ရေးဖို့ နှောင့်နှေး သွားရတာပါ။
ကိုယ် ဒီပို့စ်မရေးခင်မှာ ကိုယ့်အကြောင်းလေးနည်းနည်း ပြောပါရစေ။ ကိုယ်က ဒီစင်ကာပူနိုင်ငံကို ၂၀၀၆ ခုနှစ် မှာ ရောက်ပါတယ်။ ၂၀၀၆ ခုနှစ် သြဂုတ်လမှာ ကိုယ် ဒီနိုင်ငံက ဘွဲ့လွန် ဒီပလိုမာတစ်ခု တက်ပါတယ်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ် မှာ အလယ်အလတ် အဆင့်နဲ့ အောင်ခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကိုယ် ၂၀၀၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလမှာ ကိုယ့်လက်တွဲဖော်နဲ့ ဘ၀တိုက်ပွဲ မှန်သမျှကို ရင်ဆိုင်ဖို့ နှစ်ဖက်မိဘတွေရဲ့ သဘောတူညီချက်နဲ့ အညီ နှစ်ဖက်သော အစ်မများကို အသိသက်သေနေရာမှာ ထားပြီး လက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြပါတယ်။ ကိုယ်တို့နှစ်ယောက် တူတူစပြီးနေခဲ့တာကတော့ ၂၀၀၉ မတ်လမှပါ။ အဲဒီ ထဲက ကိုယ့်ရဲ့ အားလပ်ချိန် တစ်ဝက်နီးပါးလောက်ဟာ သူ့ထံကိုပေးအပ်လိုက်ပါတယ်။ သူ့ဘက်ကို ကြည့်ရင်လည်း အဲဒီအတိုင်းပါဘဲ။ ဒါကတော့ အိမ်ထောင်ရှင်တိုင်းလိုလို သိပါတယ်။
ကဏ္ဍများ- ကိုယ်နဲ့ ပတ်သတ်သမျှ, ခံစားချက်, အိမ်ထောင်ရေးအကြောင်း တစ်စေ့တစ်စောင်း
at Friday, February 18, 2011 ရေးသားသူ မျက်မှန်လေး
ကဲ…ဒီတခါတော့ တို့များ မိန်းကလေးပီပီ အတင်းတုတ်လိုက်ကြရအောင်။
ဒီထဲမှာ ပါဝင်ဆင်နွှဲ တုတ်လို့ရတာကတော့ စင်ကာပူက လူငယ် လူကြီး လူလတ်မရွေးဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ စင်ကာပူ ကမြန်မာဆိုင်တွေ အကြောင်းအတင်းတုတ် အဲ သတင်းထုတ်မလို့ ပါဘဲ။
အဟမ်း…အဟမ်း…. ကမ္ဘာကြီးက ရွာကြီးတရွာဆိုရင် စင်ကာပူနဲ့ မြန်မာကတော့ တံတားလေးဘဲ ခြားတဲ့ ဘေးချင်းကပ် ရွာလေး နှစ်ရွာ ပေါ့နော်။ မြန်မာ တွေတော်တော်များ များ စင်ကာပူကို အခြေချ လာတဲ့ နဲ့ အမျှ little Myanmar လို့ခေါ်တွင်တဲ့ Pennisula Plaza ကြီှးမှာလည်း သူ့ထက်ငါ အလုအယက် ဆိုင်လေးတွေဖွင့်လာ လိုက်ကြတာ ခုဆိုရင် ဆိုင်ခန်း တစ်ခန်း ထဲတောင်မှ နှစ်ခန်းခွဲ ငှား၊ ခွဲပြီးသားတခန်းကို လည်း အရှေ့ကို ဖုံးကဒ် သို့ ကွမ်းယာဆိုင်ကို ငှား အနောက်ကို ရုံးခန်း တခုကို ငှားနဲ့ တစ်ဆိုင်ထဲကို owner လေးယောက်လောက် ရှိတဲ့ အထိကို များပြားလာပါတယ်။ အဲလို များပြားလာတဲ့ အတွက် ကိုယ်တို့ အတွက်လည်း အတင်းတုတ်စရာတွေ များ ပြားလာတာပေါ့နော်။ အတင်းတုတ်ရုံတင် မဟုတ်ပါဘူး။ အကောင်းနဲ့ အဆိုး ဒွန်တွဲနေတာလေး တွေလည်း ဖော်ပြချင်လို့ပါ။
ပထမဆုံး စားသောက်ဆိုင်တွေနဲ့ စလိုက်ရအောင်။
ကဏ္ဍများ- သတင်း, ဝေဖန်ရေး နဲ့ လေကန်ရေး, ပေါက်တတ်ကရ
at Saturday, February 12, 2011 ရေးသားသူ မျက်မှန်လေး
ရူပဗေဒ ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ စိန်ထွန်း
B.Sc. Physics 1966, RASU
Ph.D. X-Ray Crystallography 1973, University of Surrey
at Thursday, February 10, 2011 ရေးသားသူ မျက်မှန်လေး
တရုတ်နှစ်ကူး ရုံး ၄ ရက်ပိတ်တာ သွားနာနေတာနဲ့ ဘယ်မှ မသွားဖြစ်ပါဘူး။ စနေနေ့ ၅ ရက်နေ့ကျ တော့ သက်သာတာနဲ့ အဲဒီပွဲကို သွားကြည့်ဖြစ်ပါတယ်။
လက်မှတ်ကဈေးကြီးတာနဲ့ အနည်းဆုံးတန်း ၅၀ တန်းကနေဘဲ ကြည့်ဖို့ ၀ယ်ထားပါတယ်။
Kallang MRT ကို 12း00 လောက်ရောက်ခဲ့ပြီး အဲဒီကနေ ကိုယ်ရယ်၊ ကိုယ့်လက်တွဲဖော်ရယ် ၊ ပြီးတော့ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းယောကျာ်းလေးတစ်ယောက် ရယ် Kallang ကနေ ရှိုးကျင်းပမယ့် Singapore Indoor Stadium ကို Taxi ငှားပြီးသွားခဲ့ပါတယ်။
ကဏ္ဍများ- ဝေဖန်ရေး နဲ့ လေကန်ရေး
at Monday, February 07, 2011 ရေးသားသူ မျက်မှန်လေး
မလေးရှားက ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ် ဖြစ်ပါတယ်။
သူရိန် ဟာ အရမ်းအလုပ်ကြိုးစားတဲ့ လူငယ်တစ်ယောက်ပါ။ မလေးရှားကို လာကတည်းက အလုပ်နဲ့ လာပြီးတော့ သူရဲ့ ကြိုးစားချက်ကြောင့် မလေးရှားမှာ အိမ်ကြီးတစ်လုံး ၀ယ်နိုင် တဲ့ အထိ ချမ်းသာလာခဲ့ပါတယ်။ သူရိန့်မှာ သူ့ငယ်ရည်းစား ခိုင်ခိုင်ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက် ရှိပါတယ်။ သူရိန်လည်း စီးပွားရေး ပြေလည်လာတာနဲ့ အလျောက် သူ့ရည်းစား ခိုင်ခိုင်ကို မိသားဖသား ပီပီ လက်ထပ်ဖို့ မြန်မာပြည်ကို ပြန်လာခဲ့ ပါတယ်။ ပထမနေ့မှာ မြန်မာ့ရိုးရာ ထုံးတမ်းစဉ်လာ အတိုင်း စုလျား ရစ်ပတ် ဘိသိတ်မင်္ဂလာ ပြုလုပ်ပြီး ဒုတိယနေ့ မှာ ဟိုတယ် မှာ ခမ်းခမ်းနားနား လက်ထပ်ခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ သူလည်း သူ့မိန်းမ ခိုင်ခိုင်ကို ခေါ်ပြီးတော့ မလေးရှားကို ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ ၀ယ်ထားတဲ့ အိမ်ကြီး ကလည်း ကြီး လင်မယား ကလည်း နှစ်ယောက်တည်းဆိုတော့ တော်တော်လေး လွတ်လွတ်လပ်လပ် နေလို့ရပါတယ်။ အိမ်က နှစ်ထပ်တိုက်အိမ်လေးပါ။ အပေါ်ထပ်မှာ စာကြည့်ခန်းရယ် ၊ သူရိန်တို့လင်မယားနေတဲ့ အိမ်သာ ရေချိုးခန်းတွဲရက်တစ်ခန်း ၊ ဘုရားခန်းတစ်ခန်း နဲ့ ဧည့်ခန်းကျယ်ကြီး တစ်ခန်းရှိပါတယ်။ အောက်ထပ်မှာတော့ ညအိပ်ညနေ လာလည် ဧည့်သည် တွေအတွက် အိပ်ခန်း နှစ်ခန်း ၊ အိမ်သာရေချိုးခန်းတွဲရက် မီးဖိုချောင်ရယ် ဧည့်ခန်းကျယ်ကြီး တစ်ခန်းရယ် ကို ထည်ဝါစွာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။
ကဏ္ဍများ- အိမ်ထောင်ရေးအကြောင်း တစ်စေ့တစ်စောင်း
at Thursday, February 03, 2011 ရေးသားသူ မျက်မှန်လေး